Ukuthandana okungenakulibaleka nokwenza ukwakha usuku
Usuku luyisenzakalo esithakazelisayo empilweni yazo zonke izintombi. Uma ufuna ukukhumbula insizwa isikhathi eside, udinga ukubheka umangalisa futhi uphelele kukho konke: izingubo, izinwele, ukwakheka kanye nomoya. Kodwa ngenxa yalokhu akudingeki uthenge izingubo ezintsha bese ugijimela salon beauty. Kungcono ukuba wena, hhayi ukukhuluma izwi lamanga nemishwana evela kulolu chungechunge, ngoba kungesabisa nje lo muntu. Gqoka izingubo ezikhululekile ukuze ukhululeke.
Ake sikhulume ngokumisa, okuzogcizelela ubuntu bakho. Abantu abaningi bathi kufanele kube njengokwemvelo ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, amanye amantombazane alungele ukuhamba ngosuku ngaphandle kokuzenzela. Kodwa kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi ubuhle bemvelo kufanele bulungiswe kahle. Kufanele uqokomise amandla akho futhi, uma kungenzeka, ukunciphisa amaphutha. Kodwa ungenzi makeup ekhanyayo futhi evuselelayo.
Ukuze wenze up, khetha isitayela okulungile kuwe. Isidlo sothando esitolo sokudlela sidinga ukunakwa okukhethekile uma usebenzisa izimonyo. Ngakho-ke, okukhethwa kukho okungcono kakhulu ukwakheka ngesitayela sothando. Kuyinto ekahle yokudla kwasekuseni nokuhamba ngaphansi kwesibhakabhaka ebusuku.
Ngakolunye uhlangothi, amadoda amaningi afana nobuhle "obubulalayo". Ungenza ukwakheka kwakho kube mnandi, kodwa kwenzeke, unikezwe isikhathi sosuku nendawo yokuhlangana. Kodwa khumbula imfihlo eyodwa yowesifazane: kusuka kunoma yikuphi, ngisho nokwenza ibhizinisi, ngokunyakaza okulodwa ungenza eyodwa kusihlwa, ungeze nje ukuphawula okumbalwa.
Udinga ukuqala ngokulungiswa kwesikhumba nokucubungula ezinye zezinkinga. Isipanji noma ukushayela ukusebenzisa isisekelo, futhi nge-concealer noma ipensela ye-beige, ungafihla izintambo. Ukuphakama kwesisekelo kumele kususwe, ukuze ungadala imigqa yokulinganisa okuzokudala. I-Hailer (i-brightener) iyadingeka ukukhanyisa okungaphezulu indawo yamashiya, impumulo ne-whisky. Faka i-pastel epholile, umbala okhanyayo we-pink noma we-peach, ukuthunga ngokucophelela. I-powder izoba yinto yangempela ku "T - zone" (ikhanda, impumu kanye nesikhunta), ngoba lapha ukuthi izigulane ezisabekayo ziholela ku-gloss fat. Kungcono ukuthenga i-powder ekhuni, kungcono ukulala phansi.
Uma kuqhubeka usuku, kutuswa ukugxila amehlo. Ngaphambi kokuba upende amajwabu amehlo akho ngezithunzi, udinga ukuphuza kancane kancane noma usebenzise ikhambi elincane le-tonal. Ngakho-ke, ngeke ziqhube phansi futhi zizohlala isikhathi eside. Izithunzi kufanele zikhethwe okwesibhakabhaka, pink, okukhanyayo noma i-lilac, futhi kuhle ukuthunzi. Izithunzi ezimnyama zizosebenza kuphela uma umhlangano kusihlwa futhi uzovakashela noma yiliphi ibha noma i-nightclub, njengoba ukuzenza kwakusihlwa kungahle kube lula, kodwa ngokulinganisela.
Okushiwo amehlo kuya kwengezwe nge-eyeliner. Zama ukudweba umugqa eduze komugqa wokukhula kwe-eyelashes bese ugcwalisa ibanga phakathi kwezinwele ze-eyelashes.
Ngakho uzonikeza ukujula kokubukeka. Kodwa ungahambi ngaphandle kwamehlo, njengoba lokhu kuzobukeka kungcolile. Ubulili buzogcizelela umugqa omnyama ku-eyelashes nomugqa wokukhanya ngaphezulu.
Qinisekisa ukusebenzisa i-mascara. Thatha, isibonelo, i-mascara enhle emanzini ekhunjulwayo engashiyi izimbungulu. I-eyelashes yamanga kungcono ukungayisebenzisi, ngoba kuyoba yinkinga uma umzuzwana ongenakukhathazeka befika unstuck. Ungasebenzisa noma i-mascara emnyama noma i-mascara ukufanisa umbala wamehlo akho.
Amadoda ayithandi amashiya amancane amancane. Bacabanga ukuthi abanikazi bamashiya anjalo bayethuka futhi babi. Ngakho-ke, kubalulekile ukubalethe ngendlela engokwemvelo ngangokunokwenzeka nge ipensela, bese ubanika i-gel yemvelo.
Njengoba sigxile amehlo, izindebe kufanele zibe mnene, zemvelo futhi zithobe. I-Cosmetologists batusa ukuba bakhethe ukukhanya kwe-shades yemvelo. Uma usukhetha ukweqa izindebe, bese ukhetha okuphikisanayo ukuze ungakhathazeki ngesikhathi sakusihlwa futhi ungagudli izindebe zakho ngokuphindaphindiwe. Uma ukhetha umbala, udinga ukucabangela izici zokubukeka kwakho. Uma unezindebe ezincane, ungatholi imibala egqamile, njengoba izokwenza izindebe zibe mncane futhi zibe mncane. Yenza okuthandayo ukukhanya imibala ekwandisa ivolumu. Phezulu, sebenzisa i-gloss nomama weparele, okuzokwenza izindebe zizwele.
Kwakukhona ukuthinta kokugcina: ukushaywa kwe-peach noma i-pink hue, i-drop of perfume yakho eyintandokazi (into eyinhloko akufanele ibenze ngaphezulu), futhi le nsizwa ngeke ime phambi kobuhle bakho, ubuhle nobumnandi.
Izimfihlo ze-holiday make-up
Imithetho yokwenza i-anti-aging makeup
Isitha esiyinqaba: amaphutha amathathu abulalayo kwansuku zonke
Indlela yokusebenzisa izimonyo: amathiphu okusebenzisa izimonyo
Indlela yokugcina umuntu-Sagittarius
Izakhiwo eziwusizo zama-anyanisi
Iklabishi igubha ngezinhlanzi ngesi-lettuce nasemaqabini olwandle
Ukudla okunomsoco, ukulimaza ekudleni kwe-Kremlin
Izifo zezinso - izihlungi zomzimba
I-avovoc ye-avovoc nge ukhilimu omuncu
I-soup puree kusuka ku-sorrel
Ukwelashwa kwe-hormonal ephephile
I-Horoscope yeSagittarius-abesifazane ngo-Ephreli 2017
Uhlobo luni lobumnene?
Ama-sandwich ane-basil crust
Kungenzeka yini ukuhlela ubulili bomntwana ongakazalwa?